Ọkachamara 15kva-500kva Open / Silent Nature Gas Generator Setịpụrụ Emeputa na orylọ Ọrụ Kpọmkwem | Gị dị ka
15kva-500kva Open / Silent Nature Gas Generator Setịpụrụ
Ngwunye gas gas generator bụ igwe ọkụ na-agba ọkụ nke gas nke nnukwu calolori bara uru dị ka gas nkịtị. Na ndabere nke ụdị a na-akwụghị ụgwọ, agbakwunye usoro supercharging na sistemụ etiti. Usoro obi jụrụ na-agbaso usoro nkewapụ nke ikuku dị elu ma dị ala. Igwe ọkụ dị elu na-eme ka cylinder ahụ dị jụụ, ahụ, isi isi na ihe ndị ọzọ dị elu, na ikuku dị ala na-eme ka gas, ikuku na mmanụ dị jụụ na-eme ka ọ dị elu.
Gas, mmanụ na coolant:
Tupu ojiji nke gas gas generator engine, ekwesịrị ịhọrọ nkọwa kwesịrị ekwesị nke gas gas, mmanụ na igwe jụrụ oyi dịka ọnọdụ na ọnọdụ eji eme ihe. Nhọrọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na enweghị oke mmetụta na arụmọrụ na ndụ ọrụ nke injin nke ihe eke gas generator generator.
1. Chọrọ maka iji gas na gas na-eweta usoro:
Mmanụ gas nke gas bụ ọkachasị gas, mana ọ nwekwara ike iji gas na-agbanye ọkụ dịka mmanụ gas jikọtara gas, mmanụ na-egbu mmanụ na gas methane. A ga-eme ka gas ahụ e ji mee ihe nwere onwe ya ka ọ ghara inwe mmiri na-enweghị mmiri, mmanụ na mmanụ na mmanụ ọkụ, yana uru dị ala dị ala nke na-erughị 31.4 mJ / m3, ngụkọta sọlfọ niile na-erughị 480mg / m3, yana ọdịnaya hydrogen sulfide. nke na-abụghị ihe karịrị 20mg / m3. Na mgbakwunye, nrụpụ ụgbọ njem nke gas dị n'ime ọnụọgụ MAP nke 0.08-0.30.
2.Mmanụ mmanụ ejiri na gas gas generator setịpụrụ ：
A na - eji mmanu mmanu mmanu mmanu ndi ozo nke ihe na - eme ka ihe na - ekpochapu ma na - ekpochapu oku, wepu ihe ojoo ma gbochie nchara site na akuku a. Ọdịmma ya abụghị naanị na-emetụta arụmọrụ na ndụ ọrụ nke injin gas, kamakwa ọ na-emetụta ndụ ọrụ nke mmanụ. a na-eji injin gas gas, 15W40CD ma ọ bụ 15W40CC, wdg
3. Nature gas generators na-eji coolant:
Igwe oyi a na-eji emezi igwe nke igwe na-eme ka mmiri dị jụụ na-ejikarị mmiri dị ọcha, mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri akọwapụtara. , nke ga - eme ka akụkụ ahụ kpoo mgbawa.Can enwere ike iji ya dị ka ọnọdụ okpomọkụ nke ihe mgbochi oyi kwesịrị ekwesị nke antifirizi ma ọ bụ na mbido tupu ejuputa mmiri ọkụ, mana kwesịrị ozugbo mmiri ịkwụsị.
Nke gara aga: Moveable / trailer ụdị Dizel Generator Set
Osote: Osimiri Water Desalination Generator Set
.Dị Prime Ike Ugboro Jụrụ ụzọ Nnweta ikuku Modeldị Injin Akara engine
YDNG-12Y 12 15 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YD4M1D (480) YANGDONG
YDNG-20Y 20 25 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YD4M3D (480)
YDNG-15Y 15 18.75 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YD4B1D (490)
YDNG-30Y 30 37.5 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YD4B3D (490)
YDNG-30Y 30 37.5 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YD4102D
YDNG-30L 30 37.5 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YDN1004 H .NANYA
YDNG-40L 40 50 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YDN1006
YDNG-50L 50 Ogbe 62.5 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YDN1006
YDNG-60L 60 75 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDN1006ZD
YDNG-80L 80 100 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDN1006ZD
YDNG-80W 80 100 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YDN615D YLỌ
YDNG-100W 100 125 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDN615AZLD
YDNG-120W 120 150 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDN615AZLD
YDNG-100W 100 125 50/60 mmiri jụrụ Ochicho obi YDN618D
YDNG-150W 150 Ogbe 187.5 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDN618AZLD
YDNG-200W 200 250 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDN618AZLD
YDNG-250W 250 312.5 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ YDNWP13
YDNV-150 150 Ogbe 187.5 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ V6 Uchechukwu
YDNV-200 200 250 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ V8
YDNV-300 300 375 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ V12
YDNV-400 400 500 50/60 mmiri jụrụ Inter-obi jụrụ V16
Tụkwasịnụ ọnọdụ: Injin gas gas (unit nwere tank mmiri), Alternator, isi, modul njikwa, usoro mgbanye, usoro nchịkwa gas, nrụgide na-achịkwa valvụ, ọkụ ọkụ, nlele nrụgide, ihe mgbochi na igbe ọrụ enweghị usoro.
1, The gas enweghị free mmiri ma ọ bụ ndị ọzọ free bekee (adịghị ọcha size ga-erughị 5 m).
2, Methane ọdịnaya bụ ihe na-erughị 95% ， gas calorific value biogas abụghị ihe na-erughị 550 / 600kcal / m³ ， gas gas calorific value ≥850 / 600kcal / m³ ， ma ọ bụrụ na-eji low calorific value gas （calorific value <850 / 600kcal / m³） ， ike nke unit belatara ntakịrị.
3, Hydrogen sulphide ọdịnaya na gas <200mg / m³ ， oké sọlfọ ọdịnaya chọrọ desulfurization.
4 、 Nrụgide ntinye gas 3-100KPa ； Achọrọ onye nkwado maka ihe na-erughị ， ma achọrọ valvụ enyemaka maka ihe karịrị 100Kpa
5、1 afọ akwụkwọ ikike ma ọ bụ 150/600 awa nke nkịtị ọrụ, nke ọ bụla na-abịa mbụ
6, Gas oriri: 0.33 m3 / KWH maka eke gas
Moveable / trailer ụdị Dizel Generator Set
5kw emeghe / nkịtị ikuku mma dizel generator set
10-1000kva Open ụba Ddị dizel Power Generat ...